Ny tsy fananana zo fototra sy ny tsy fananana zo
Fampahafantarana momba ny tsy fahampian'ny hery sy ny tsy fananana zo
Ny tsy fananana zo dia ny anarana nomena ny fiarovan-tenan'ny vatana mba hiarovana amin'ny marary sy ny ady amin'ny aretina. Rafitra sarotra izany, ka ny fakàna an-keriny dia rava amin'ny sokajy.
Fanohanana ny tsy fananana zo
Ny tsy fahampian-tsakafo dia ny fiarovan'ny vatana ampiasaina amin'ny fisorohana sy ny ady amin'ny aretina. SEBASTIAN KAULITZKI / Getty Images
Ny fomba iray hanambarana ny fiarovana ny tsy fahampiana dia tsy voafaritra sy voafaritra manokana.
Fiarovana tsy misy fepetra - Ireo fiarovana ireo dia miady amin'ny raharaha vahiny sy ny aretin'andoha. Ny ohatra dia ahitana sakana ara-batana, toy ny moka, ny lohalika, ny volom-borona, ary ny cilia. Ireo sakana ara-tsimia koa dia karazana fiarovan-tena tsy voafaritra. Ny sakana hidin'ny chimique dia ny pH-n'ny hoditra sy ny japona, ny lysozyme enzyma amin'ny ranomaso, ny tontolo iainan'ny vava, ary ny sofina.
Fiarovana manokana - Fiarovan- dàlana io mavitrika amin'ny fandrahonana manokana, toy ny bakteria manokana, viriosy, prions, ary miboridana. Ny fiarovan-tena manokana izay miady amin'ny aretina iray dia matetika tsy mavitrika amin'ny iray hafa. Ohatra iray momba ny tsy fahampiana manokana dia ny pox pox resistance na avy amin'ny fiterahana na ny vaksiny.
Fomba iray hafa hanaparitahana ny valim-panafahan'ny immune dia:
Innate Immunity - karazana fiarovana ara-boajanahary izay nolovaina na nifototra tamin'ny famaritana hena. Ity karazana fiarovan-tena ity dia manome fiarovana hatramin'ny zaza teraka ka hatramin'ny fahafatesana. Ny tsy fahaleovantena dia ny fiarovana ivelany (ny andalana voalohany amin'ny fiarovana) sy ny fiarovana anatiny (andalana faharoa amin'ny fiarovana). Ny fiarovana anatiny dia ny tazo, ny rafi-pikoranana, ny sela voajanahary (NK), ny areti-maso, ny phagozyta ary ny interferon. Ny tsimokaretina voajanahary dia fantatra ihany koa ho fiarovana ara-pananahana na tsimatimanota ara-pianakaviana.
Ny tsy fahampian-tsakafo - Ny fahazoan-tombontsoa na fanamafisana dia ny fahatelo amin'ny fiarovana ny vatana. Izany no fiarovana amin'ny karazan'aretina. Ny fahazoan-dàlana nomena dia mety ho voajanahary na artifisialy amin'ny natiora. Ny antotanisa voajanahary sy artifisialy dia manana singa mandalo sy mavitrika. Ny voka-dratsin'ny vatana dia vokatry ny aretina na ny vaksiny, raha toa kosa ny fiterahana dia azo avy amin'ny voajanahary na amin'ny ankapobeny ny fahazoana antikora.
Andeha hojerentsika akaiky ny fiarovan-tena mivaivay sy ny tsy fitoviana ary ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo.
Ny lymphocytes dia manaiky ny antigène ao amin'ny efitra ivelany. JUAN GARTNER / Getty Images
Ny fiarovana amin'ny tsimokaretina dia avy amin'ny fakana aina. Ireo marika eo amin'ny tontolon'ny fanjanahana dia mihetsika toy ny antigène, izay tsy maintsy misy toerana ho an'ny antikora. Ny antikôlôjia dia molekiola proteinina Y, izay mety ho azy manokana na mifatotra amin'ny endriky ny sela manokana. Ny vatana dia tsy mitahiry antikôpia atsy ho atsy mba haka fanafody avy hatrany. Ny dingana iray antsoina hoe ny fifantenana sy ny fiparitahan'ny klôro dia manangana antikôla ampy.
Ohatra mikasika ny tsy fahampian'ny moto
Ohatra iray amin'ny fiarovana ny natiora voajanahary dia miady amin'ny hatsiaka. Ohatra iray amin'ny fiarovana amin'ny ati-batana dia manangana fanoherana amin'ny aretina noho ny fisorohana. Ny fihetsika tsy dia tsara loatra dia valim-batraky ny antigen, vokatry ny tsy fahampian'ny hery.
Karazana fiantohana mavitrika
Ny fihanaky ny fahantrana dia mitaky ny fakana aina na ny antigène misy otrikaretina.
Ny fanandramana ny antigène dia mitarika amin'ny famokarana antikôla. Ny antikôlôjia dia manamarika ny sela ho an'ny fandringanana amin'ny sela manokana antsoina hoe lymphocytes.
Ny cellules misy ifandraisany amin'ny hery fiarovana mavitrika dia ny sela T (cytotoxique T celles, ny cellules T, ny fahatsiarovan'ny T ary ny cell suppressor T), ny sela B (ny sela B sy ny efitranon'ny plasma) ary ny sela B, ary macrophages).
Misy ny faharetan'ny fifindran'ny antigène sy ny fahazoana ny tsimatimanota. Ny fivoahana voalohany dia mitarika ho amin'ny antsoina hoe voalohany. Raha misy olona voan'ny aretin-tsaina indray aoriana, dia haingana kokoa sy matanjaka ny valiny. Antsoina hoe valinteny faharoa izany.
Mitaky fotoana lava be ny tsy fahaleovantena. Afaka miaritra mandritra ny taona na amin'ny fiainana manontolo izany.
Misy voka-dratsin'ny voka-dratsin'ny vatana. Mety ho tafiditra ao amin'ny aretina sy ny tsy fahampian-tsakafo izy io, fa tsy miteraka olana.
Ny renim-pianakaviana iray dia manome ny antikôty amin'ny zanany amin'ny alàlan'ny ronono. Sary Source / Getty Images
Ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy mitaky ny vatana hanajanona antikôpazy amin'ny antigène. Ny antikôla dia ampidirina ivelan'ny vatana.
Ohatra tsy ampy amin'ny teny nerlandey
Ohatra iray amin'ny fiarovana ara-boajanahary voajanahary ny fiarovan'ny zazakely amin'ny voka-dratsin'ny aretina sasany amin'ny fananganana antikora amin'ny alalan'ny colostrum na ronono. Ohatra iray amin'ny fiarovana amin'ny tsimokaretina amin'ny atiny ny fisian'ny antisera, izay fampiatoan'ny antibody. Ny ohatra iray hafa dia ny fampidirana bibilava miafina aorian'ny fanaovana sakafo.
Karazan-tsoratra tsy manan-kialofana
Ny tsy fahampian'ny fandeferana dia omena avy any ivelan'ny vatana, ka tsy mitaky amin'ny fakana aina mpitsabo na ny antigène izany.
Tsy misy ny fahatarana amin'ny hetsik'ireo tsy manan-kialofana. Ny valinteniny amin'ny mpitsabo iray dia mifindra avy hatrany.
Ny tsy fahampian'ny fahazoan-dàlana dia tsy maharitra toy ny tsy manan-kery. Indraindray dia mahomby mandritra ny andro vitsivitsy.
Ny toe-javatra antsoina hoe aretina serum dia mety hiteraka olana amin'ny antisera.
Karazana fandrosoana ara-boajanahary
Torolàlana ho an'ny karazan'aretina samihafa
Fampidirana ny famoronana Genome CRISPR
Amyloplast: Ahoana no itehirizana ny zavamaniry?
Inona no dikan'ny hoe azo avaozina (miaraka amin'ny ohatra)
Taratasy fampandrenesana mialoha ny fotoana fohy na andro alohan'ny fanafihana
Ahoana no fomba hanamboarana ny momba ny havokavoka
Tetikasan'ny Tetik'asa ho an'ny olombelona
Ahoana ny fomba fanaovana modely ADN mampiasa Candy
Ireo voan'ny ankamaroan'ny ratra ao anaty vatana aorian'ny fandidiana
Ahoana ny fomba hanesorana DNA avy amin'ny Banana
Fahatsiarovana mafana indrindra maneho ny alahelon'ny trompetra
Firy ny Golfera Nifototra Tamin'ny Andron'ny Mpitarika?
Ahoana ny fametrahana ny taratasy eo amin'ny sambo Gulf
Ny momba ny Yamaha Viking VI EPS
Top 100 Country Songs of the 1990s - Part 5
Adjectifs Frantsay: Adjectifs Démonstratifs
10 Angano momba ny finoana silamo
Ireo Sinoa Sinoa Sinoa efatra
Ny zavatra rehetra efa nirinao hianatra momba ny Gymnast Shawn Johnson
Ny fifidianana tamin'ny taona 1828 dia notsongaina tamin'ny lozisialy maloto
Manaiky ny anjely Guardian amin'ny finoana silamo
Amin'ny fampiasana lalao handraisana tsanganana
Fijerena ny toerana misy azy
Causas por las que se podría para la ciudadanía de Estados Unidos
Fitsipika an-dakilasy - Ny fototry ny fitantanana tsara ny efitrano fianarana
Inona avy ny Fannie Mae sy Freddie Mac?
Hevi-diso: Natao hisotro vodka avy amin'ny tavoahangy ve ity puppy ity?
1996 PGA Championship: It's Brooks amin'ny Playoff
Famaritana tsotra ho an'ny "Rompre" (hanonganana) amin'ny teny Frantsay
Inona no mahatonga ny Skateboarder Rodney Mullen Dia Great
Ny Legioma Urban Russell Sleep Experiment
Fikarakarana ny fiarovana ny moron-drano ho an'ny sambo 16-26
Big Shark White